मेलम्चीझैँ बगिरहेछ ङाजुको आँशु... | Nagarik News - Nepal Republic Media
मेलम्चीझैँ बगिरहेछ ङाजुको आँशु...
हेलम्बु डाँडाको फेदमा कच्ची सडक छेउ बस्ने ५२ वर्षीया ङाजु तामाङका आँखा हेलम्बु पहाडझैँ रसाइरहन्छन्। मेलम्ची पहाड यो बर्खा निकै रसायो। थान्किएजस्तो अझै देखिँदैन, चिस्यान बगिरहेकै छ। त्यही पहाडको रसायनले कमेरे माटोको लेदोे बोकेर बगेजस्तै ङाजुका आँखा रसाइरहन्छन्। हेलम्बु पहाडले जस्तो ङाजुका आँशुले कसैको बित्याँस पारेको भने छैन। बरु दिनदिनै आफ्नै आँत भने सुकाएको छ।
करिब सय मिटर तल मेलम्ची बगिरहेको छ। यसो हेर्दा लाग्छ मेलम्ची रिसाएको छ। पहिलेभन्दा फरक रङ तर तेजमा बग्दै छ मेलम्ची। छेउछाउका पहरा, लहरा, झार, बुट्यान अनि गेग्रानको लेदोमात्र होइन मेलम्चीले वरपरका घरबस्ती र मानिसलाई नै आफैसँग लगेर गयो यसले। हेलम्बु पहाड फेदमा रहेको गणेशेबगरको सिङ्गो बस्ती मेलम्चीले आफूसँगै कहाँ पु¥यायो कुनै अत्तोपत्तो छैन। करिब ४३ घरको त्यो बस्ती एकै मेसोमा बगर बने। अहिले त्यहाँ एकाध घरका अवशेष देखिन्छन्, तर बस्ती बगरमा परिणत भएको छ।
बगरबीचमा ढलेर आधा पुरिएको पहेँलो रङको घर ङाजुको थियो। घर पुरेको महिना दिन बढी वितिसकेको छ तर उनी त्यो घर ठाडिइहाल्छ कि भन्ने आशले हरेक दिन त्यही ढिस्कोमा हेर्न पुग्छिन्। ढलेको घर के उठ्थ्यो? उठ्दैन। उनको मनले पत्याउन भने मानेको छैन।
ङाजुजस्तै आफ्नो घर पहिलेजस्तै उठिदिएहुन्थ्यो भन्ने सपना सबै स्थानीयवासी देख्छन् र बिहानबेलुकै घरको निशाना रहेको बगरको परिक्रमा गर्ने गर्छन्। वरपरको वातावरण उस्तै उराठ र सुनसान छ। आवाज छ त त्यही मेलम्चीको एकोहोरो सुस्साहटको। कति मेहनतले सिङारेको घर भक्लक्क ढालेर बगरले पुर्दा उनको अझै आँशु थामिएको छैन। 'सर्वस्व गयो मेरो, जे थियो त्यही घर थियो, अब त यही आँशुमात्र बाँकी छ' आँशुका धारसँगै बग्छन् उनका शब्द पनि। कोही नयाँ व्यक्ति पुगेर केही सोध्यो कि मनको घाउ बल्झाउन आएजस्तो लाग्छ ङाजुलाई। मन नलागेपनि यसरी आफ्ना व्यथा पोखेको दुई महिनाभन्दा बढी भयो।
'एउटा घर बगाएर कहाँ लग्यो थाहा छैन, अर्को एउटा बगरमा पल्टिएर बसेको छ। मिलबाट निकालेको थोरै चामलले केही दिन जीवन धानियो, अहिले दाताको भरमा चुलो बन्दै छ', आँशु पुछ्दै उनले दुःख सुनाईन्। मुरीकामुरी धान, मकै र चामलका बोरा सबै मेलम्चीले निल्यो। अहिले त अन्नको सग्लो दाना देख्दा पनि उनको आँखा थप रसाउँछन्।
केही माथि संस्थाले बनाइदिएको अस्थायी टहरामा बसेर उनको परिवार अहिले गुजारा गर्दैछन्। उनले थपे, 'सङ्घ संस्थाले खाना दिएको छ, त्यही खाएर बस्ने बसिराछौँ, दाताको सहयोग आएन भने भोकै बस्नुपर्छ।' बाँकी भएको बाँदर खेल्ने पखेरोमा अन्न फल्दैन। अब कसरी जीवन गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ।
घर बगाएको ठाउँबाट तल गहिरोमा थियो खोला। घरबाट खोला हेर्न सकिँदैन थियो। त्यहाँ ठूलो फाँट पनि थियो। सबै बगर बनेको छ। अस्तिसम्मको घरबस्तीबाटै मेलम्ची आफ्नै तालमा मस्त कुदिरहेको छ। बाढी आएको दिन गाउँमा रोपाइँ थियो। ङाजु रोपाइँ सकेर घर फर्कदै थिए। उनका अनुसार आउँदाआउँदै उतिसलगायतका रुख निकै ठूलो आवाजका साथ गर्लम्मै ढले। कहाँ के भयो? केही पत्तो भएन। तर एकैछिनमा हेर्दा त माथिको माछा फार्म बगाइसकेको रहेछ। अनि मान्छेको भागभाग भयो। बल्लतल्ल ज्यान जोगियो उनले सम्झिए।
गणेशे बगरका स्थानीय राम तामाङका अनुसार असार १ गते साँझ ७ बजे बाढी आएको थियो त्यसदिन खोला छेउका केही घर लग्यो। पछि १६ गतेदेखि परेको भिषण वर्षाले १७ गते साँझ एक दुई घर मात्रै बाँकी राखेर अन्य ४३ घर लग्यो। त्यसपछि बनेको यहाँको अस्थायी टहरामा तीन समूहमा बाढीपीडित बस्दै आएका छन्। सबै मेसमा खाना खान्छन्।
उनीहरुले सरकारसँग सबै स्थायी बासको माग गरिरहेका छन्। 'बरु एकीकृत बस्ती बनाइदिए हुन्थ्यो, भाडाको जग्गामा यसरी कति दिन बस्ने', राम तामाङले भने। दिनमा बाढी आएकाले मात्रै त्यहाँ मान्छे जोगिएको उनीहरु सुनाउँछन्। केही अघि उक्त बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उनीहरुको पुनर्वासका लागि तत्काल व्यवस्थापन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।
यसपाली मेलम्चीको माथिल्लो हेलम्बु क्षेत्रमा खोला किनार कटान गर्दै र पहिरो खस्दै गेगरसहितको अकल्पनीय बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको हो। अझै लाखौँ टन गेगर अड्किएर बसेकाले तल्लो क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ।उता जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रारम्भिक विवरणमा २२७ घर बगेको अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए। कूल दुई हजार १०० रोपनी बढी जग्गा लगेको छ। बाढी, पहिरो र डुवानबाट यो वर्ष १३१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४२ जना हराइरहेका छन्। रासस
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ १४:०७ बुधबार
हेलम्बु डाँडाको फेदमा